XAQIIQ: Madax Wayne Shaaciyay Xidig Ay Liverpool Ay Doonayso, Lacagta Heshiiskiisa Lagu Burburin Karo Iyo Booska Uu Ka Ciyaaro. - Gool24.Net
XAQIIQ: Madax Wayne Shaaciyay Xidig Ay Liverpool Ay Doonayso, Lacagta Heshiiskiisa Lagu Burburin Karo Iyo Booska Uu Ka Ciyaaro.
Kooxda Liverpool ayaa doonaysa saxiixa xidiga aadka loo qiimeeyo ee Milot Rashica kaas oo ka tirsan kooxda horyaalka Jarmalka ee Werder Bremen waxaana warkan xaqiijiyay madax waynaha xidhiidhka kubbada cagta Kosovo ee Agim Ahmedi.
Madax waynaha xidhiidhka kubbada cagta dalka Kosovo ee Agim Amedi ayaa si rasmi ah u shaaciyay in kooxda Premier League ee Liverpool ay doonayso saxiixa xidiga dalkiisa ee Rashica wuxuuna sidoo kale xusay in kooxda RB Leipzig ay dhinaceeda ka xiisaynayso 23 sano jirkan.
Milot Rashica waa 23 sano jir khadka dhexe wacdaro ka soo sameeyay isla markaana soo jiitay kooxaha waa wayn ee Yurub waxaana hadda la xaqiijiyay in Liverpool ay tahay kooxda doonaysa inkasta oo ay tartan kala kulmayso kooxda RB Leipzig.
Milot Rashica waxa uu u ciyaaraa kooxda horyaalka Bundesliga ee Werder Bremen wuxuuna soo bandhigay qaab ciyaareed sabab u noqday in kooxda Jurgen Klopp ee Liverpool ay xiisaynayso in ay la soo wareegto.
Madax waynaha xidhiidhka kubbada cagta Kosovo ee Agim Amedi oo ka hadlaya kooxo badan ee doonaya saxiixa Milot Rashica iyo gaar ahaan Liverpool ayaa yidhi: “Waxaa jira dalabyo badan oo isaga lagu doonayo. Anigu waxaan ogahay in Liverpool oo Premier league ka dhisani ay isaga doonayso, laakiin sidoo kale Leipzig oo Bundesliga ah ayaa doonaysa”.
Agim Amedi ayaa xusay in 23 sano jirkan la siin doono tallada ugu fiican wuxuuna yidhi: “Waxaan hubaa in isaga qaabka ugu fiican loo siin doono talada ugu wanaagsan si uu go’aan u gaadho”.
Lacagta lagu burburin karo heshiiska Milot Rashica ee kooxdiisa Werder Bremen ayaa lagu sheegay in uu yhay 33 milyan gini kaas oo haddii ay Reds bixiso ay si toos ah u heli karto khadka dhexe ee sida wayn loo xiisaynayo.
Liverpool ayaa si xor ah ku lumin doonta adeega Adam Lallana kaas oo ay bil iyo badh ka hadhsan tahay qandaraaskiisa Liverpool laakiin Jurgen Klopp ayaa u muuqda in uu haddaba sii helay badalkiisa oo noqon kara Milot Rashica.